युक्रेनमा रुसविरुद्ध युद्ध लड्दै नेपाली युवा, को हुन् उनि ? भिडियो सहित — Imandarmedia.com
युक्रेनमा रुसविरुद्ध युद्ध लड्दै नेपाली युवा, को हुन् उनि ? भिडियो सहित
काठमाडौँ। रुसले युक्रेनमाथि आ’क्र’म’ण गरेपछि दुवै देशबीच सशक्त यु’द्ध चलिरहेको छ। रुसी सेना युक्रेनका ठूला सहरहरुमा घुसेर त्यहाँ आ’क्र’म’ण गरिरहेका छन्। यसबीच नेपाली युवा प्रताप बस्नेत पनि रुसविरुद्ध युक्रेनका तर्फबाट यु’द्ध लड्न गएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल उनको एक भिडियोमा उनले आफ्नो घर नेपाल भएको र नाम प्रताप बस्नेत भएको खुलाएका छन्। रुसले आ’क्र’म’ण गरेपछि युक्रेनमा रहेका धेरै नेपाली राजधानी किभबाट भागेर छिमेकी देश पोल्याण्ड, बेलारुस, जर्मनी लगायतका देश पुगेका छन्।
तर किभमै रहेका नेपाली युवा बस्नेत भने युक्रेनका लागि रुसविरुद्ध यु’द्ध लड्न सेनामा भर्ती भएका हुन्। तेस्तै, भारतीय विद्यार्थीलाई युक्रेनमा बन्धक बनाइएको भन्ने रुसी विवरणहरुलाई दिल्लीले अस्वीकार गरेको छ।
विद्यार्थीहरुलाई युक्रेनी सशस्त्र फौजले ‘मानव ढाल’ बनाएको र उनीहरुलाई रुसी भूमिमा जानबाट रोक्न हरेक उपाय गरिएको रुसले दाबी गरेको थियो। तर, बिहीबार सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमा ‘कुनै पनि विद्यार्थीलाई बन्धक बनाएकोे रिपोर्ट प्राप्त नभएको’ जनाएको छ।
भारतीय विद्यार्थीलाई युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खारकिभबाट बाहिर जान सहयोगको लागि विशेष रेलको व्यवस्था गर्न भारतले युक्रेनी अधिकारीहरुसँग सहयोग गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ, हजारौं भारतीय विद्यार्थी अझै पनि खारकिभमा अलपत्र परेका छन्।
तेस्तै, स्पेनको प्रहरीले पाँच जना पाकिस्तानी नागरिकलाई आ’तं’कवा’दी गतविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प’क्रा’उ गरेको छ। इस्लामिक कट्टरपन्थीविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई स्पेनिस नागरिकको ह’त्या गर्न कट्टरपन्थीलाई उक्साएपछि प्रहरीले प’क्रा’उ गरेको हो।
पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई फेब्रुअरी २१ मा बार्सिलोना, जेरोना, उबेदा र ग्रानाडाबाट प’क्रा’उ गरेको एक मिडिया रिपोर्टले जनाएको छ। प’क्रा’उ पर्नेहरु २० वर्ष उमेर समूहका छन् । उनीहरुको कनेक्सन पाकिस्तानको कट्टरपन्थी इस्लामी समूह, तहरीक-ए-लब्बैकसँग पाइएको छ।
जसले इस्लामिक कानूनको कार्यान्वयन र निन्दा गर्नेहरूलाई मृ’त्यु’द’ण्ड’को वकालत गर्दछ। राष्ट्रिय उच्च अदालतका न्यायाधीश म्यानुएल गार्सिया-कास्टेलोनले आ’तं’क’वा’दी संगठनसँगको सहकार्य, महिमा र ह’त्या गर्न उक्साएको आरोपमा सबै अभियुक्तहरूलाई हिरासतमा राख्ने आदेश दिएका छन् ।
प’क्रा’उ परेकाहरु पेरिसमा सेप्टेम्बर २०२० मा भएको हमलासँग पनि जोडिएको पाइएको छ। चार्ली हेब्डोको व्यंग्य पत्रिकाले जनवरी २०१५ मा एक जिहादी आ’क्र’म’ण’को सामना गरिसकेको छ ।
जसमा आठ व्यक्तिको मृ’त्यु भएको थियो। दोस्रो आ’क्र’म’ण’मा दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए। २५ वर्षीय पाकिस्तानी जहीर हसन महमूदले पैगम्बर मुहम्मदको काटुन पुन: प्रसारित गरेको भन्दै फेरि आ’क्र’मण गर्ने तयारी गरेका थिए।
फ्रान्सेली पुलिस अनुसन्धानले जहीर हसन महमूद र तहरीकए-लबाइक पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाएको छ। जसका कारण निगरानी राखेर स्पेनले उच्च सतर्कता अपनाएको थियो।
अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि अहिले प’क्रा’उ परेकाहरूले सामाजिक सञ्जालहरू, मुख्यतया फेसबुक र टिकटकका प्रोफाइलहरू, उर्दू पाकिस्तानमा बोलिने भाषामा एक प्रामाणिक प्रचार यन्त्रको रूपमा प्रयोग गरेका थिए।
जसको माध्यमबाट उनीहरूले सिर्जना गरेको श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रसारित गरेका थिए। रिपोर्टमा भनिएको छ, उनीहरूले युरोप र पाकिस्तानमा उनीहरूलाई निन्दा मान्नेहरू विरुद्ध गरिएको आ’तं’क’वा’दी हमलाको प्रशंसा गरे।
तिनीहरू धेरै सक्रिय थिए र स्पेनमा मात्र होइन, धेरै अनुयायीहरू फ्रान्स, ग्रीस वा इटाली जस्ता अन्य युरोपेली देशहरूमा पनि छन्।
अनुसन्धानको नजिकका स्रोतहरूले औंल्याए। यो उनीहरूको कट्टरपन्थी सन्देशहरूको बढ्दो पहुँच थियो जसले गिरफ्तारीलाई अगाडि बढाएको थियो।समूहका कथित नेता बार्सिलोनामा गिरफ्तार गरिएको थियो।
अर्को दुई, गिरोनामा अर्को, उबेदा जेनमा र अन्तिम, ग्रानाडामा प’क्रा’उ परे। उक्त अपरेसन बार्सिलोनाको प्रान्तीय गुप्तचर इकाई र सामान्य सूचना प्रहरी स्टेशन, राष्ट्रिय गुप्तचर केन्द्र सीएनआई र पुलिस सहयोगका लागि ईयू एजेन्सी युरोपोलले गरेको एएनआईले जनाएको छ।
युक्रेनको पक्षमा लड्दै नेपाली युवा !! pic.twitter.com/wuGnnozwma
— Chiran Sharma (@chiranuk) March 2, 2022